कमाइभन्दा बढी खर्च छ ? यसरी बढाउन सकिन्छ बचत « Khabarhub
कमाइभन्दा बढी खर्च छ ? यसरी बढाउन सकिन्छ बचत
काठमाडौँ- अहिले मानिसहरुको मुख्य समस्या रोजगारी छ । कमाई हुनेको पनि खर्च असाध्यै छ ।
बेरोजगारलाई कमाउने चिन्ता छ । कमाएकाहरूलाई बचतको चिन्ता छ । कतिपय मान्छेले भन्ने गर्छन ‘मेरो हातमा त पैसा नै बच्दैन के गर्ने होला ? यदी तपाई पनि पैसा बचाउन नसकेर हैरान हुनुहुन्छ भने अपनाउनुहोस् यी उपाय-
खर्च टिप्ने बानी
तपाईले पैसा बचाउन चाहानुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला जागर चलाएर हरेक दिन गर्ने खर्चलाई टिप्ने बानि बसाल्नुहोस् ।
एक हजारको नोट जब साटिन्छ, त्यो कहाँ जान्छ थाहा नै हुँदैन,’ मानिसहरुले धेरै गर्ने गुनासोमा यो पनि पर्छ ।
मानिसहरुको हातमा पैसा भएपछि त्यो कतिबेला खर्च भयो भन्ने नै मानिसले थाहा पाउँदैनन् ।
दुध, चिया, पत्रिका, तरकारी, आदिमा दैनिक रुपमा खर्चका शीर्षकहरू हुन् । यस्ता सानासाना आवश्यकतामा खर्च भइरहेपनि मानिसहरुलाई यसको बारेमा थाहा भइरहेको हुँदैन ।
त्यसैले दिनभरिमा गरेको खर्चलाई बेलुका घरमा पुगेर त्यसलाई डायरीमा टिप्ने बानी गर्नुभयो भने तपाईले दिनभरिमा गरेका खर्चको जानकारी हुन्छ ।
यसले भोलिपल्ट हुने खर्चलाई बचाउँछ अथवा भोलिपल्ट पैसा खर्च गर्नु अघि एक पटक अघिल्लो दिनको खर्च याद हुन्छ ।
तपाईसँग हरेक महिनाको आम्दानीको विवरण आएपछि त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि योजना बनाउनु पर्छ ।
मानिसका आवश्यकता धेरै हुन्छन् तर आम्दानी सिमित हुने भएकोले त्यसलाई योजनाबद्ध रुपमा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
हामी बिहानै उठेपछि चिया खानको लागि बाहिर निस्कन्छौँ। यसले गर्दा अस्वाभाविक रुपमा हाम्रो खर्च बढिरहेको हुन्छ ।
सकेसम्म घरमा नै बनाउन सकिने खानेकुरा घरमा नै खाने बानीले पनि बचत बढाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७७, शनिबार ६ : ३३ बजे